Ufuna kuphela izithako ezikhethekileyo
Unokwenza i-sodium silicate okanye iglasi yamanzi kwi-gel beads (silica) kwaye ucoce i-sodium hydroxide. I-silicate ye-silicate ingasetyenziselwa ukwenza igadi zeekhemikhali, njengalezo ezibangelwa nguMicrock Rocks , onokuzenza.
Izinto ze-Silicate Materials
Konke okufuneka ukwenze isisombululo se-sodium silicate ngamanzi, i-silica, kunye ne-sodium hydroxide. I-silica iza kula maphepha amancinci athi "Musa ukutya" ofumene nge-electronics, izicathulo kunye nezinye iimveliso.
I-hydrodium i-hydroxide ifumaneka ngokulula kwifomu yayo ecocekileyo okanye ingafumaneka njenge-drain cleaner .
6 i- silika ye-gel ubuhlalu (ichithwe)
4-8 g i-hydroxyde ye-sodium (4 g yeglasi yamanzi, esetyenziswe kwiprojekthi ye - Magic Rock , okanye i-8 g yesilinganiso se stoichiometric se-silicate solicate)
10 mL amanzi
Lungiselela i-Sodium Silicate
Gqoka i-gear efanelekileyo yokukhusela, equka iiglavu.
Ukushisa 4 ukuya ku-8 amagremu e-sodium hydroxide kwi-10 milliliters zamanzi.
Emva kokuba i-hydroxyde sodium ichithwe, yongeza ngokukhawuleza i-gram 6 ye-silika ye-gel ubuhlalu. Ukushisa isisombululo phakathi kwongeziweyo. Ukuba iintsimbi ezichotshoziweyo aziyi kuchithwa, yongeza amanzi amancinci kwisisombululo.
Ngoku unayo i-sodium silicate okanye iglasi yamanzi. NurdRage inevidiyo ye-YouTube yale nkqubo ukuba unomdla ekuboneni ukuba yenziwe njani.
Imbali yekhibhodi yekhompyutha
Ngaba Iimvukazi Zifunga Igazi?
Iincwadi eziphezulu malunga nobuKatolika